पीडित मल्लले जाहेरी फिर्ता लिएपछि रुप ज्योति छुटे
२०७६ कार्त्तिक २९ गते २०:००
काठमाडौं । कार्तिक २१ गते ठगी गरेको अभियोग पक्राउ परेका ब्यवसायी डा. रुप ज्योति प्रहरी हिरासतबाट आज छुटेका छन् । रुप ज्योतिविरुद्ध ठगी गरेको भन्दै जाहेरी दिने विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले जाहेरी फिर्ता लिएपछि उनी छुटेका हुन् । ठग्यो भन्दै उजुरी दिएका मल्लले लेनदेन विवाद मिलेको भन्दै उजुरी फिर्ता लिएका हुन् । यो मुद्दामा पीडित भनिएका विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले प्रहरीलाई प्रयोग गरिएको प्रष्ट देखियो । जे भए ... read more...
ठेकेदार गौतमको त्यो महल जहाँबाट २५ जना जुवाडे समातिएका थिए
२०७६ कार्त्तिक २८ गते ११:५०
काठमाडौं । दुई बर्षअघि राजधानीस्थित दरबारमार्गको ल्याण्डमार्क होटलमा भएको सामूहिक बलात्कार काण्डका मुख्य अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५ बर्ष २ महिना सजाय गर्ने निर्णय सुनाएको छ । उक्त बलात्कार काण्डमा रामेछाप निवासी शैलेस कार्कीलाई मुख्य अभियुक्त भनिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले पीडित भनिएकी युवती ७ लाख रुपैयाँ भराउने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त घटनामा स ... read more...
सीई कन्स्ट्रक्सनले खनेको खाल्डोमा यसरी परे उद्यमी डा. रुप ज्योती
२०७६ कार्त्तिक २६ गते १२:११
काठमाडौं । ठगी अभियोग लागेका उद्यमी डा. रुप ज्योती र पीडित भनिएका विगेन्द्रकृष्ण मल्लको आर्थिक सम्बन्ध त्यो तहसम्मको नरहेको दाबी गरिएको छ । रुप ज्योतीका तर्फबाट यस्तो दाबी गरिएको हो । ‘डा. रुप ज्योती र ल्याण्डमार्क डेभलपर्स प्रालिको व्यक्तिगत र कानूनी रुपमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन । उक्त कम्पनीको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा डा. रुप ज्योती र निजको परिवारको पनिकुनै सम्बन्ध छैन’, रुप ज्योतीका ... read more...
हुण्डाईको डरलाग्दो ठगी: 'नाफाबाहेक प्रतिगाडि २५ लाख बढि लिइन्छ'
२०७६ कार्त्तिक २६ गते ०९:३२
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल्स ब्रान्ड हुन्डाईको नेपाल बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपाली ग्राहकलाई एउटा गाडीमा नियमानुसार नाफाबाहेक कम्तिमा २५ लाख रुपैंया ठगी गरेको खुलेको छ । पछिल्लो समय हुन्डाईले भित्राएको ‘कोना’ नामक विद्युतिय गाडीमा समेत लाखौं रुपैंया ठगी गर्दै आएको रहस्य खुलासा भएको हो । जुन गाडीमा सरकारले राजश्व समेत छुट दिएको छ । कोरियामा निर्मित कोना गाडी ... read more...
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई ‘ट्रयाकआउट’ गर्न यतिसम्म फोहोरी खेल
२०७६ कार्त्तिक २६ गते ०९:१२
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नरको दौडमा छिर्नका लागि त्यहाँका कनिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी निरौलाले बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई ‘ट्रयाकआउट’ गर्न षडयन्त्र गरेको खुलेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोगी भएको आधार देखाउँदै सिवाकोटीको डिजाइनका आधारमा नै विभागीय जिम्मेवारीमा नपर्ने विविध अभियोग लगाउँदै सरकारले श्रेष्ठमाथि ... read more...
व्यवसायी तथा पूर्व अर्थसहायक मन्त्री रुप ज्योति एयरपोर्टबाटै समातिए
२०७६ कार्त्तिक २१ गते २२:१०
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले भेट्रान व्यवसायी एवम् पूर्व अर्थ सहायकमन्त्री रुप ज्योतिलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । उनलाई विदेशबाट आउँदै गर्दा बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रिअवि) बाटै पक्राउ गरिएको हो । हाउजिङका नाममा विभिन्न व्यक्तिसँग रकम उठाई ठगी गरेको उनीमाथि आरोप छ । उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०७५ सातल मंसिर २० गते पक्राउ गर्न अनुमति दिएको ... read more...
युनाइटेड बिल्डर्सको बदमासीः तीन महिना पनि टिकेन कालोपत्रे
२०७६ कार्त्तिक २१ गते ११:४७
काठमाडौं । बौद्ध व्यापार संघ र स्थानीयहरूले सडक कालोपत्रे माग राख्दै गत वैशाख अन्तिमतिर बौद्ध क्षेत्रमा सडक नै ठप्प पार्नेगरी आन्दोलन गरे । त्यसपछि स्थानीय र ठेकेदारबीच सडक पिच गर्ने सम्झौता भएसँगै जेठ अन्तिमतिर चावहिल–साँखु सडकखण्डको टुसाल चोकदेखि बौद्ध गेटसम्म करिब एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो । करिब चार वर्षदेखि धुलो र हिलोबाट आक्रान्त बनेका स्थानीय कालोपत्रे भएपछि खुसीले गद्गद् भएका थिए ... read more...
२५ 'विग सट' वाला जुवाडेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा !
२०७६ कार्त्तिक १२ गते १९:३६
काठमाडौं । आइतबार विहान रातको २ बजे पक्राउ परेका २५ जना जुवाडेहरुलाई थप दुई मुद्दा लाग्नसक्ने संभावना बढेको छ । पहिलो त, २५ जना जुवाडेहरुबाट बरामद भएको दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ वैध वा अवैध प्रष्ट छैन । यदि उक्त बरामद रकम अवैध भएको खण्डमा उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आकर्षित हुनेछ । दोस्रो, २५ जना जुवाडेबाट बरामद भएको करोडौं रुपैयाँको वैधानिक स्रोत के हो ? सम्पत्तिको स्रोत खुलेको छैन भने उ ... read more...
कुलमानको ब्यवस्थापनः स्वदेशी उत्पादनबाटै 'तिहार झिलिमिली'
२०७६ कार्त्तिक ९ गते २०:०७
काठमाडौं । तीन वर्ष पहिले बत्तीको पर्वको रूपमा रहेको तिहारमा सहजरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने कुरा कल्पना बाहिरको विषय थियो । नेपाली मान्यताअनुसार लक्ष्मीले उज्यालो मन पराउँछिन् तर बत्तीको जोहो गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भने कसरी विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो । घरायसी उपभोक्ताले साँझको समयमा समेत बत्ती बाल्न नपाएर निराश हुन्थे । उनीहरु सरकार र प्राधिकरणलाई गाली गरेर अँध् ... read more...
अनक निर्माण सेवा जसले समयअघि नै राप्तीमा पुल निर्माण गर्यो
२०७६ कार्त्तिक ८ गते १२:०२
काठमाडौं । केही निर्माण व्यवसायी अर्थात ठेकेदार कम्पनी यस्ता पनि छन् जसले सम्झौता समयअघि नै विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन् । पछिल्लो समय सम्झौता समयअघि नै पुल निर्माणको काम सकेर चर्चामा आएको छ-अनक निर्माण सेवा प्रालि । उक्त ठेकेदार कम्पनीले नेपालकै दोस्रो लामो पुल मानिएको 'राप्ती पुल' को निर्माण काम सम्झौता समयअघि नै सम्पन्न गरेको हो । जुन पुलले राप्तीको सिसहनियाँ-महादेवा जोड्ने काम गर ... read more...
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको बुढानिलकण्ड नगरपालिकाको चपलीस्थित नयाँ शाखाको शुभारम्भ भएको छ । बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा बुढानिलकण्डस्थित चपलीमा आफ्नो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो शाखाको सञ्चालनसँगै बैंकको शाखा कार्यालयको संख्या ९७ पुगेको छ । बुढानिलकण्ड नगरपालिकाका मेयर उद्धवप्रसाद खरेल तथा बैंकका सञ्चालक गजेन्द्र विष्टले संयुक्त रुपमा शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेक ... read more...
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नियमविपरीत एक उपसचिवलाई काजमा तानेको छ । मन्त्री रघुवीर महासेठ र उनको सचिवालयको स्वार्थमा काम नगरेको भन्दै सडक विभागका कानुन उपसचिव शम्भुराज रेग्मीलाई मन्त्रालय तानिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव रेग्मीले मन्त्री तथा उनका सहयोगीले व्यक्तिगत लाभ हुनेगरी दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, आगामी खरिद कारबाही मूल्यां ... read more...
नक्कली नोट, पैसा छाप्ने मेसिनसहित ३ जना समातिए
२०७६ कार्त्तिक ४ गते १२:४३
काठमाडौं । महानगरीय बृत्त बौंद्धले नक्कली नोट बनाउने मेसिनसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर वडा नम्बर ६, बिपुलचोक स्थित रहेको रोशन दुवाडीको घरमा भाडामा बस्ने २८ बर्षीय पृथ्वीराज भन्ने राजन परिवार, दोलखा मेलुङ गाउँपालिका-७ घर भई हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर६ नयाँबस्ती बस्ने बर्ष ३५ बर्षीय सन्तोष नेपाली र सोही ठाउँका २१ बर्षीय महेन्द्र नेपाली रहेका ... read more...
एकै पटक १५ ठेकेदार कम्पनीलाई ७ दिने स्पष्टिकरण (नामावलीसहित)
२०७६ कार्त्तिक ३ गते १६:१७
काठमाडौं । काठमाडौंका सडक तथा पुलको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरी अलपत्र पार्ने १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले स्पष्टिकरण सोधेको छ । ७ दिनभित्र चित्त बुझ्दो कारणसहित स्पष्टिकरण नदिए १५ वटै ठेकेदार कम्पनीलाई विभागले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने बुझिएको छ । काठमाडौंका सडक, पुल र बाटो स्तरोन्नतीको काम नगर्ने १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई एकैचोटी स्पष्टिकरण सोधिएको सायद यो नै ... read more...
काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु दरबारमार्गस्थित रहेको 'क्लब भिक्ट्री' मा लागेको भिषण आगलागीबाट करोडौंको क्षति पुगेको बताइएको छ । आइतबार साँझ विद्युत सर्ट हुँदा उक्त क्लबमा आगलागी भएको थियो । उक्त आगो निभाउन करिब ३ घण्टा लागेको थियो । केही बर्ष पहिले पनि 'क्लब फेसज' मा आगलागी भएको थियो । आगो निभाउनका लागि जुद्ध वारुण यन्त्र, काठमाडौं महानगरपालिका, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्र ... read more...
काठमाडौं । ३८ क्विन्टल सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेका थप एक अभियुक्त संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा पक्राउ परेका छन् । तस्करी गिरोहका एक नाइके कृष्ण गोपाल अग्रवाल ‘काले’ लाई नेपाल प्रहरीको आग्रहमा युएई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनी गिरोहका मुख्य लगानी कर्तामध्ये एक हुन् भन्ने खबर नयाँ पत्रिका दैनिक छ । दुई स ... read more...
प्रहरीले बेवारिसे सामान बरामद गरी भन्सारलाई बुझायो
२०७६ असोज २४ गते २०:३३
मोरङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले १ लाख १५ हजार भन्दा बढिको भन्सार छली गरेको ल्याएको सामान बरामद गरेको छ । मोरङ विराटनगर महानगरपालिका-१३ स्थित भारतबाट भन्सार छली ल्याएको उक्त परिमाण बराबरको खाद्यान्न सामाग्री फेला पारी भन्सार कार्यालय बुझाईएको हो । बरामद भएका सामाग्रीहरुमा नरिवल, पापड, सुजी, मिश्री, खोर्सानीको धुलो, पानीपुरीलगायत रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद सामान बेबार ... read more...
'लगानी स्वागत छ, चिनियाँ रेल ऋणमा होइन, अनुदानमा बन्नुपर्छ'
२०७६ असोज २२ गते १६:५६
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ राष्ट्रपतिको यही असोज २५ र २६ गते हुने दुई दिने राजकीय भ्रमणलाई स्वागत गर्ने भएको छ । काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले उक्त खुलासा गरेका हुन् । उनले भने,‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आउनु खुशीको कुरा हो । हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं ।’ नेता महतले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला नेपाल भ्रम ... read more...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अवैध सुनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले नवलपरासीका ४० वर्षीय धुब्रबहादुर दर्लामी र बाग्लुङका २५ वर्षीय नीरबहादुर परियारलाई मङ्गलबार साँझ पक्राउ गरेको हो । वृत्तका प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक छेदुलाल कामतीले त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै सुन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । 'त्रि ... read more...
घाटाको ब्यापारः कुल आम्दानी ५ करोड, इन्धन खर्च मात्र ७ करोड
२०७६ असोज १३ गते १०:०८
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले इन्धन खर्चसमेत नउठ्ने गरी काठमाडौं-ओसाका उडान सञ्चालन गरेको छ । भदौ १२ गतेदेखि एक महिनामा निगमले गरेको १० उडानमा इन्धनमा मात्र ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, यात्रुबाट भने ५ करोड १६ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । हवाई क्षेत्रमा कुल खर्चमध्ये इन्धनको लागत ३५ प्रतिशत मात्र पर्छ । निगमका अनुसार २ सय ७४ सिट क्षमता भएको एयर बस ३३० ले भदौ १२ बाट ओसाका उडान भ ... read more...
चिनियाँ लामा र स्थानियबीचको लफडा मिलाउन छानविन समिति गठन
२०७६ मंसिर ३ गते १९:५८
हत्या गरि फरार रहेका दुई अभियुक्त समातिए
२०७६ मंसिर ३ गते १९:१६
अन्ततः डिएसपीले थापेको पासोले पुर्‍यायो तरुण नगरसभापति शाहलाई जेल
२०७६ मंसिर ३ गते १३:१५